Waxbarasho - Howling Pixel
Waxbarasho (Af-Carabi: تعليم Af-Taliyaani: educazione Af-Ingiriis: education Amxaari: ትምህርት)
World map indicating Education Index based on the 2009 QM Human Development Report
Kani waa maqaal ku saabsan guud ahaan macalinka.
Macalin, Macalim (ingiriis: teacher; carabi: المدرس ama المعلم) waa qof waxbarasho u dhiga arday. Jaadyada macalimiintu way kala duwan yihiin, ka soo biloow macalinka diinta, macalinka xaafada, macalinka dugsiyada, macalinka khabiirka ah (sidoo kale loo yaqaano proffoser) ilaa shakhsiyaadka takhasuska ku ah xirfado gaar ah, dhammaan waxay ka siman yihiin waa qof waxbaraya, fahansiinaya, u sharaxaya qof kale.
Qofka wax baranaya waxaa lagu magacaabaa "arday".
Sida caadiga ah, macalinku waa mid aqoon fiican u leh waxa uu barayo, sidoo kale leh cilmi guud ahaaneed taasi oo u fududeynaysa inuu la jaanqaadi karo noocyada kala duwan ee waxbarashada.
Ereyga macalin ma ahan erey asal ahaan ka mid ah luuqada Soomaaliga; waxaanu ka soo amaahanay ereyga Al-macalim ee Afka Carabiga.
Sida diinta Islaamku sheegtay macalimku waa waalidka labaad ee ardeyga. Taas macnaheedu waa qadarin, sharaf iyo naxariis badan ayuu kugu leeyahay macalinka wax ku baraya.
Bulshada Soomaaliya (Af-Ingiriis: demographics of Somalia; Af-Carabi: ديمغرافيا الصومال) waa mashruuc xambaarsan macluumaad badan oo ku saabsan beelaha, reeraha, luuqadaha, tirada bulshada, heerka waxbarasho, caafimaadka, dhaqaalaha, diimaha iyo qodobo kale oo saamayn ku leh bulshada.
Deegaanka Camuud (Amoud Valley) waa dhul beeroleey ah oo dhaca 5 km waqooyi bari magaalada Borama. Deegaankan oo leh dooxyo dhowr ah, sida Dooxa Qoor-gaab, ayaa waxuu caan ku yahay beeraha khudaarta iyo midhaha. Jaamacadda Camuud waxay ku taalaa koonfurta deegaanka Camuud, taasi oo ah meesha loogu magac daray jaamacada.Qisaastii wakhtiyadii gumeysiga Ingiriisku maamuli jiray waqooyiga Soomaaliya ayaa wuxuu dhisay dugsi sare oo loogu magac daray deegaanka Camuud, waa Dugsiga Sare ee Camuud. Tan iyo wakhtigii dowladii Siyaad Bare dugsiga Camuud wuxuu ahaa iskool ardeydu wax ka bartaan isla mar ahaantaana dhex dagan yihiin, sababtoo ah magaalada wuu ka go'naa dugsiga sare ee Camuud.Ka dib, burburkii dowladii Soomaaliya ayaa keenay in dugsigii sare isna burburo, kaasi oo dib loo soo nooleeyay sanadkii 1996dii markii la isla gartey in laga dhigo Jaamacada Camuud.}}
Dhaqanka Soomaalida (Af-Ingiriis: Culture of Somalia; Af-Carabi: ثقافة صومالية) waa hab nololeedka iyo nidaamka dhaqan ee dadka Soomaalida ah; taasi ooy ka mid tahay luuqada, cuntada, suugaanta, fanka, farshaxanta, habaynta iyo soo bandhiga heesaha Soomaalida, ruwaayadaha, majaajilooyinka u dhaqanka ah dadka Soomaalida ah meelkasta ooy joogaan, gaar ahaan inta ku dhaqan Bariga Afrika.
Guud ahaan, dhaqanka Soomaalidu waa haybada iyo sharafta u gaarka ah bulsho weynta Soomaalida meel kastooy caalamka kaga dhaqan yihiin. Sidoo kale, dadka ku hadla Af Soomaaliga waxay leeyihiin fan iyo suugaan aad u heersareeya, qani ku ah aqoon iyo xirfad qoto dheer. In kastoo fanka maanta jira yahay mid aad u da' yar wuxuu leeyahay waaxyo iyo noocyo aad u badan. Kuwaasi waxaa ka mid ah heesaha qaaciga, qaraamiga, heesaha jaaska, ruwaayadaha, majaajiloyinka, filimaanta, bandhigyada fanka, qoob-ka-ciyaarka iyo guud ahaan madadaalada ku baxda luuqada Soomaaliga.
Dugsi waa goob waḥbarasho oo ay ardaydu wax ku bartaan oo ay ku bartaan waxyaabo kala duwan dugsigu Waxa uu leeyahay marxalado kala duwan dugsiga ḥiligiisa ugu horeeya waxaa lagu tilmaamaa ama lagu magacaabaa uulo oo xilagaas wadamada ʿcaalamka badidooda waḥbarashadu waa qasab. Dugsigu waxa uu u qaybsamaa laba nooc oo kal ah mid ay dawl; adi maamusho iyo mid sigaara loo leeyahay
Gedo (Af-Ingiriis: Gedo, Af-Carabi: جوبا الوسطى) waa gobol ka tirsan wadanka Soomaaliya, kaasi oo dhaca meel u dhow xadka wadankaasi la wadaago Kiinya.
Gobolka Gedo waxaa magaalomadax u ah magaalada Garbahaarreey.
Jaamacad (Af-Ingiriis: University; Af-Carabi: جامعة) waa xarun waxbarasho, cilmi-baadhis, aqoon ururin heer sare leh taasi oo bixisa Shahaadooyin darajo sare leh.
Jaamacada Boosaaso waxee ku taalaa magaalada Boosaaso ee woqooyiga Soomaaliya. Jaamacadaan waa jaamacad ween oo waxbarasho heersaro laga barto.
Kuliyada Caafimaadka (ingiriis: Faculty of Medicine) ee Jaamacadda Camuud waa waaxda caafimaadka ee jaamacada taasi oo ku dhex taala dhismaha weyn ee Hosbitaalka Hayaat ee magaalada Borama.
Magalo waa meel dad badani degenyihiin oo xarun u ah deegaanada ka agdhow eemarkaa raacsan. Magaalo inta dhexe, waxaa ku yaala ganacsiyaal iyo dhaqaalo kale.
Magaalo Waa Deegaan Rasmi ah oo leh Dhismayaal Ma Guurto ah oo Lehna Adeegyo Bulsho oo Aasaasiya Sida Dugsiyo Waxbarasho, Iyo Goobo Caafimaad
Magaalo waa dhul ama deegaan balaaran, dhisan oo dadyoow badan si joogto ah ugu noolyahay, Laga heleyo adeegyada bulshada. waxaana ka soo horjeedo Baadiyo, Magaalada waxeey leedahay Nidaam guud sida kireynta guryaha, Gaadiidka dadweynaha iyo dhismooyin dhaadheer.
Waxbarashada Soomaaliya (Af-Ingiriis: Education in Somalia; Af-Carabi: التعليم في الصومال) waa nidaamka waxbarasho ee wadanka Soomaaliya. Sida saxda ah, Wasaarada Waxbarashada ayaa ka masuul ah dhamaan tacliinta iyo waxbarashada wadanka Soomaaliya, taasi oo ay ku baxdo ilaa 15% miisaaniyada dowlada.
Maamulgoboleedka Somaliland iyo Puntland waxay leeyihiin nidaamyo u gaar ah, kuwaasi oo hoostega Wasaaradaha Waxbarasho ee maamuladaasi.
Xidig waa dab weyn oo cirka ku daadsan.Xidigta adduunka u dhaw waa Qoraxda oo energi badan siiyo Aduunka. Xidig kale oo aduunka u dhaw wa Proxima Centauri. Qoraxda waxee aduunka u jirtaa 149.600.000 km. Qof bin aadan oo xidigta u dhawaan karo majirto!!Xidigta ugu weeyn ee samada oo la ogyahay, waxaa la dhahaa VY Canis.
waxeena adduunka u jirtaa 5,000 oo if sanadeed ah.Xidigaha waxaa la arki karaa habeenkii, markii ee qoraxda dhacdo.